2km QSFP28 Vagadziri | China 2km QSFP28 Fekitori & Vatengesi
HUA-QS1H-3102D yakafanana 100Gb / s Quad Diki Fomu-chinhu Chinogoneka (QSFP28) optical module. Iyo inopa yakawedzera port density uye yakazara system mutengo kusevha. Iyo QSFP28 yakazara-duplex Optical module inopa 4 yakazvimiririra yekufambisa uye kugamuchira chiteshi, imwe neimwe inokwanisa 25Gb / s mashandiro ehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwe100Gb / s pa2km yeiyo imwechete mode fiber.
An fiber fiber ribhoni tambo ine LC / UPC Duplex connector inogona kubudiswa muQSFP28 module yekugamuchira. Kurongeka kwakakodzera kunovimbiswa nemapini ekutungamira mukati mechinhu chinogamuchirwa. Iyo tambo kazhinji haigone kumonyaniswa kune chaiyo chiteshi kune chiteshi kurongedza. Kubatana kwemagetsi kunoitwa kuburikidza neMSA-inoenderana 38-pini yekumucheto mhando yekubatanidza.
Chigadzirwa chakagadzirwa nefomu chinhu, Optical / magetsi kubatanidza uye dhijitari yekuongorora interface maererano neQSFP28 Multi-Source Chibvumirano (MSA). Iyo yakagadzirirwa kusangana neyakaomesesa ekunze mamiriro ekushanda anosanganisira tembiricha, hunyoro uye EMI kupindira. Iyo module inogona kutarisirwa kuburikidza neI2C maviri-waya serial interface.
Huawei Olt Mutengo, External Modulation Transmitter, Huawei Qsfp +, Xfp Transceiver, Sfp C ++, Optical Fiber Module,